Iza no Mpitarika ny Vavolombelon’i Jehovah? | Diary 2015
Biby tsy manan-doha tsy mandeha
Nanoratra tany amin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Atoa Colón, tamin’ny 13 Jolay 1957. Hoy izy: “Tokony hataontsika izay hanesorana ny misioneran’ny Vavolombelon’i Jehovah eto amin’ny firenena, fa izany no hahafoana an’io sekta io. Tsy hisy lohandohany hitarika azy intsony ny mpiara-mivavaka aminy amin’izay. Tsy hahomby ry zareo, rehefa tsy eo intsony ny lohany.” Izay mantsy ilay hoe: “Ny biby tsy manan-doha tsy mandeha.”
Tsy ela taorian’izay, dia nasain’i Arturo Espaillat, minisitry ny filaminam-bahoaka, niala teto ireo misionera folo sisa teto. Nanoratra tany amin’i Trujillo i Roy Brandt, tamin’ny 21 Jolay 1957, ary nangataka ny hihaona taminy mba hanazavana ny finoantsika. Izao ny ampahany tamin’ilay taratasy: ‘Toy ny nataon’ny olona fahiny tamin’ny apostolin’i Jesosy ihany izao ataon’ny olona amin’ny anaran’i Jehovah Andriamanitra izao.’ Nasain’ny Rahalahy Brandt namaky ny Asan’ny Apostoly toko faharoa ka hatramin’ny faha-6 àry i Trujillo, ary hoy izy: “Mbola azo ampiharina amin’izao ihany ny torohevitr’i Gamaliela Mpitsara. Mitombina tsara mantsy ilay izy sady mivantana be.” Nataon’ny Rahalahy Brandt sora-baventy ny ampahany tamin’ny Asan’ny Apostoly 5:38, 39 hoe: “AVELAO IREO OLONA IREO, FA RAHA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA IZAO ASA ATAONY IZAO, DIA HO LASA MPIADY AMIN’ANDRIAMANITRA IANAREO.” Toy ny rano nararaka teo an-damosin’ny gana fotsiny anefa izany. Noroahina ny misionera tamin’ny 3 Aogositra 1957.
‘I Jesosy no lohan’ny fiangonana’
Niandraikitra ny asa teto i Donald Nowills, tamin’izy 20 taona monja
Nanao ahoana ireo rahalahy sy anabavy rehefa lasa ny misionera? Tsy hisy lohandohany hitarika azy tokoa ve izy ireo, araka ny tenin’Atoa Colón? Diso hevitra izy. I Jesosy mantsy no “loha amin’ny vatana, dia ny fiangonana.” (Kol. 1:18) Tsy toy ny biby tsy manan-doha mihitsy àry ny vahoakan’i Jehovah teto. Mbola nikarakara azy ireo foana i Jehovah sy ny fandaminany.
Voatendry hiandraikitra ny asa teto i Donald Nowills, rehefa lasa ny misionera. Vao 20 taona izy tamin’izany, ary vao vita batisa efa-taona. Efa mpiandraikitra ny faritra nandritra ny volana vitsivitsy izy, nefa tena mbola nanavao azy ny asan’ny sampana. Nanana birao tsotsotra ny Rahalahy Nowills tao amin’ilay trano hazo nipetrahany. Nitafo fanitso ilay tranony ary tsy nisy gorodona. Tao Gualey, faritra nampidi-doza teto Ciudad Trujillo, no nisy azy io. Nataony kopia Ny Tilikambo Fiambenana mba hozaraina tamin’ny Vavolombelona eran’ny Repoblika Dominikanina. Nanampy azy tamin’izany i Félix Marte.
Kopia tamin’ny Tilikambo Fiambenana 1958
Nanampy an’ny Rahalahy Nowills koa i Mary Glass. Mbola nigadra i Enrique vadiny tamin’izany. Hoy i Mary: “Nijanona niasa aho tamin’ny dimy tolakandro, ary nankany amin’ny biraon’ny Anadahy Nowills mba hanampy azy. Nila naverina nosoratana tamin’ny taratasy mantsy ny lahatsoratra tao amin’ny Tilikambo Fiambenana, ary izaho no nanao izany tamin’ny milina fanoratana. Nanao kopia be dia be tamin’izany ny Anadahy Nowills avy eo, ary milina tsotsotra no nampiasainy. Nanampy koa ny rahavavy iray avy any Santiago, izay nomena anaram-bosotra hoe ‘Anjely.’ Nataon’izy io tao amin’ny fanambanin’ny daba fasiana menaka ireo gazety. Nosaronany lamba ireo gazety, ary nasiany mangahazo, na ovy, na saonjo teo amboniny. Norakofany gony teo amin’ny farany ambony. Nandeha fiara fitateram-bahoaka nianavaratra ilay rahavavy, ary nametrahany gazety iray avy izay fiangonana nandalovany. Nifandimby nindrana sy nianatra an’izany ny fianakaviana.”
Hoy ihany i Mary: “Tsy maintsy nitandrina be izahay, satria feno polisy ny lalana. Tian’izy ireo ho fantatra mantsy hoe aiza ireny Tilikambo Fiambenana ireny no atao pirinty. Very maina anefa ny ezaka nataon’izy ireo, satria niaro anay foana i Jehovah.”